MW CMC Iyo Fikiradii Shacabwaynaha Ee Kuwajahnaa Argagixisada - Cakaara News
MW CMC Iyo Fikiradii Shacabwaynaha Ee Kuwajahnaa Argagixisada
Jigjiga( Cakaaranews ) Arbaco, 24ka february 2016. Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa galinkii danbe ee maanta guriga usoo jeediyay inay kahadlaan fikirkooda ku aadan argagixisada.
Hadaba waxay shacabwaynaha deegaanka oo si qoto dheer u soo dhigay fikiradooda ay sheegeen inay dhamaantood ka go’an tahay ladagaalanka aragagixisada gabaadka kadhiganaya diinta islaamka iyo waliba tabihii loola dagaalami lahaa iyagoo tilmaamay in manaahijta madarisadaha iyo masaajidada il-gooni ah loo wada yeesho iyo in mad-habta shaaficiyada ee aan haysano ay tahay in si toos ah loogu dhaqmo. Waxaa kale oo ay sheegeen in shacabka deegaanku yahay shacab kumidaysan ahlu-suna-wal jameeca diyaarna u ah inuu ka takhaluso caqiidooyinka sida khaldan diinta uturjumaya ee Alqushaash, All-itaxaad, ISIL, Buku-Xaaraam, Alqaacida iwm. Waxayna hadalkoodii kusoo xidheen in shacabwaynaha deegaanku kamidaysan yahay ladagaalanka xagjirnimada iyo argagixisada iyagoo hal meel ah uga soo wada jeedsanaya wax kasta oo khal khal galinaya xasilinooda iyo hormarka deegaanka diintana meel kaga dhacaya iyagoo si xoogan u cambaareeyay dhamaan ururada argagixisada iyo wixii laxidhiidha.
Kadibna Culimo-awdiinka iyo Golaha Arimaha Islaamka ayaa sicad u qeexay waxa ay argagixisadu tahay iyagoo ku nuux nuuxsaday in shiicadu tahay mida ugu daran khalad uturjumida diinta islaamka iyo waliba inaysan banaanayn in laqaato nidaamka dhaqamadooda iyo labiskooda. Culimada ayaana si wayn u canbaaraysay dhamaan ururada argagixisada ee diinta islaamka turjunka khaladka ah kabixinaya sida AL-QUSHAASH, DAACISH, ISIL, AL-ITIXAAD, SHIICO, BUKU-XAARAAM, AL-QAACIDA iyo wixii lahalmaala iyagoo culimadu soo bandhigay kitaab kamid ah manhajka ay wax kubaraan ardayda madarisadaha oo fadeexaynaya Nabigeenii Suubanaa ee Muxammad (N.N.K.H) iyo asxaabtiisii, ilaahayna suuraynaya.
Hadaba Xukuumada DDSI oo ka dhiidhiday xagjirnimada iyo khaladka ay diinta islaamka u isticmaalayaan ayaa ilaahay uga bariday dhamaan argagixisada inuu umada kaqabto iyadoo shacabwaynuhuna uu halmar gacmaha kor utaagay oo uu ‘aamiin’ uyidhi. Xukuumada ayaana sheegtay inay kago;an tahay ladagaalanka xagjirnimada iyo wax kastoo diinta iyo nabadda shacabka deegaanka iyo kadalkaba carqaladaynaya.
Dhanka kale, xukuumada DDSI ayaa lacag deeq ah oo dhan 24milyan ku caawisay agoontii ay waalidkood UBBOdu laysay, xubnihii ku dhaawacmay dagaaladii UBBO iyo waliba shacabkii ay dhibaatada ugaysteen intaba iyadoo ay odoyaasha deegaanku madashaas kugudoonsiiyeen.
Waxaa iyana madasha shacabwaynuhu fadhiyay lasoo hor istaajiyay in kabadan 40 ubbo ah oo ciidanka gaarka ah ee deegaanku kusoo qabqabtay dagaaladii ugudanbeeyay islamarkaana goobta kaqirtay dhibaatadii ay kuhayeen shacabka deegaanka iyo sidii wanaagsanayd ee ciidanku uladhaqmay kadib markii dagaalka lagu qabtay iyagoo daawayn iyo nafaqaynba ciidanku siiyay.
Ugudanbayna, waxaa kulan-waynihii lagu soo khatimay 3 heesood oo katurjumaya waxqabadkii nabadgelyo, horumar iyo maamul suuban ee uu XDSHSI soo hoyiyay 5tii sano ee u danbaysay, iyo baaqyo kasoo baxay kulan-waynaha.